जुकरबर्गलाई सिनेटरहरूले ६ सयभन्दा बढी प्रश्न सोधेका थिए । ती फेसबुक प्रयोगकर्ताका प्रोफाइल विवरण लिएर तेस्रो पक्षले क्याम्ब्रिज एनालिटिका नामक राजनीतिक कन्सल्टेन्सीलाई उपलब्ध गराइएको खुलासा केही समयअघि भएको थियो । यसले गर्दा उक्त डाटाको प्रयोग गरी सन् २०१६ को चुनाव नतिजा बदल्ने काम भएको कुराले अमेरिकाको राजनीतिक वातावरण तातेको छ । आठ करोड ७० लाख… Read More »
यस्तो व्यवस्था अबको ९ वर्षपछि अर्थात् २०८३ सालबाट लागू गराउन कानुन आयोगले सुझाव दिएको शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले जानकारी दिए । ‘नपढेका व्यक्तिहरु नीति निर्माण गर्ने थलो संसदमा पुगेको र देशको कार्यकारी प्रमुखसमेत बनेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला आएको सुझाव मननयोग्य छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी त्यसलाई अध्ययन गर्दैछौं ।’ आठ कक्षासम्म… Read More »
कसरी चल्यो अप्रिल फूलको चलन ?
हरेक वर्ष अप्रिल १ गते अप्रिल फूल दिवस मनाएर मानिसहरु अरुलाई मुर्ख बनाउने प्रयत्न गर्दछन् । एक अर्कालाई मुर्ख बनाएर मजाक गर्नेहरु धेरै हुन्छन्, यस दिनमा । आखिर अप्रिल १ तारेखलाई किन मुर्ख दिवस भनिन्छ त ? योसँग जोडिएका केही रोचक किस्सा छन् । अप्रिल फूल डेको सुरुवात फ्रान्सबाट भएको विश्वास गरिन्छ । सन् १५८२… Read More »
Category: Uncategorized बिबिध